Sacuudiga oo dafiray inay wax ka ogyihiin halka la geeyay meydkii wariye Jamal Khashoggi” | Qaran News
Sacuudiga oo dafiray inay wax ka ogyihiin halka la geeyay meydkii wariye Jamal Khashoggi”
Writen by Qaran News | 4:37 am 22nd Oct, 2018
Dowladda Sacuudiga oo shalay qiratay in lagu dhex dilay qunsuliyadeeda magaalada Istanbul wariye Jamal Khashoggi ayaa iminka sheegtay in aysan ka war hayn halka la geeyay meydka wariyaha.
Wasiirka arrimaha dibedda dalkaasi Adel bin Ahmed Al-Jubeir ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in eysan ka warhayn halka la geeyay ama lagu qariyay meydka wariyaha kaas tuhumo kala duwan laga sameeyayl.
War laga sii daayay taleefishinka dowladda Sacuudiga ayaa lagu sheegay in baarista horudhaca ah ee la sameeyay ay sheegeyso in wariye Jamal Khashoggi lagu dhex dilay qunsuliyadda dhexdeeda, islamarkaana 18 sarkaan oo markaasi qunsuliyadda ku sugnaa loo xiray faldambiyeedkaas.
Wariyaha la dilay Jamal Khashoggi
” – Muran iyo gacan-ka-hadal dhex maray Jamal Khashoggi iyo saraakiishii uu kula kulmay gudaha qunsuliyadda ayaa waxaa ay sabababeen in uu geeriyoodo, kuwii faldambiyeedkaasi ka dambeeyayna ay isku dayeen in ay qariyaan falka dilka ah ee ay geysteen”, ayaa lagu yiri qoraal dowladda kasoo baxay oo warbaahinta laga baahiyay.
Boqorka dalka Sacuudiga ayaa magacaabay guddi uu ku jiro dhaxalsugaha lagu tuhmayo in uu amray dilka wariyaha ee Mohammed bin Salman kuwaas oo isbadel ku sameynaya sirdoonka dalka iyo qaabka ay u shaqeeyaan.
Waxaa shaqada laga eryay madaxa sirdoonka dalkaasi Ahmad al-Assiri, iyo nin la taliye u ah qoyska reer boqorka, Saud al-Qahtani sababo la xiriira fadeexadan ka dhacday gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul ee wariyaha lagu dilay.
Jamaal Khashoggi oo ahaa wariye dhaliila siyaasadda dhaxalsugaha da`da yar ee dalkaasi Maxamed Bin Salmaan, ayaa qunsuliyadda u tegey si uu u buuxiyo warqado uu ku guursan lahaa gacalisadiisa ,Hatice Cengiz oo u dhalatay dalka Turkiga.
Gabadhaas oo la socotay markii uu qunsuliyadda tagayey ayaan loo ogolaan in ay gudaha u gasho, sida uu nidaamku yahayna, Khashoggi waxaa uu iska reebay oo uu saaxiibadii uga tagay telefoonkiisa gacanta, isagoona ku wargeliyay in ay booliska wacdo hadii uu soo noqon waayo.
Dowladda Turkiga oo baaritaan ku sameysay qunsuliyadda ayaa sheegtay in wariye Jamal lagu dhex dilay, laguna jarjaray gudaha qunsuliyadda.